Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ kacha mma 25 kacha dịrị m nso na Myrtle Beach na US
- Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ Erimeri Mebere m -
Ọ bụrụ na ọ na -atọ gị ụtọ n'ihe oriri mmiri, anyị nwere obi ụtọ ịkọ na America na -enye plethora nke ụlọ oriri na ọafụafụ nke ga -emeju agụụ ọ bụla.
Ọ bụrụgodi na ị na -achọ ụlọ oyster mara mma nke nwere ọrụ nkwanye ugwu ma ọ bụ ụlọ oriri na ọafụ seụ na -eme mkpọtụ egwu egwu na akụkọ ihe mere eme, ha niile na -eje ozi nri mmiri kacha mma na ọpụrụiche mpaghara.
Azụmaahịa ndị a na-enweta ihe nrite na-enye efere oporo mara mma, ọkacha mmasị mpaghara, yana ọbụna ihe menu ụdị ụlọ nri. E depụtara ụlọ nri iri abụọ na ise kacha elu na United States na Myrtle Beach n'okpuru.
15 Ụlọ oriri oriri na ọafụafụ kacha mma na United States
1. Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ Erimeri: Fiola Mare, Washington DC
Nke Fabio Trabucchi Fiola Mare bụ ụtụ maka nri na -enweghị atụ dị n'akụkụ oke osimiri Mediterenian. A na-akọwa ụtọ nri nri mmiri Ịtali site na menu na-agbanwe agbanwe mgbe niile nke na-erite uru na ngwaahịa ọhụrụ.
Nchịkọta nhọrọ agba nwere agba, yana efere na -adọrọ mmasị nke akwụkwọ nri kacha ọhụrụ, nri mmiri, na steepụ ọgịrịga, yana ihe ọ rawụ organicụ ndị dị ndụ, achịcha dị ụtọ, na ihe ụtọ dị ụtọ.
Ọzọkwa, a na -enye mmanya mmanya sitere n'ike mmụọ nsọ na ịdị ọcha dị mfe n'ụlọ mmanya. Ejikọtara menu mmanya na mmanya na -emesi ike na ụtọ na ịdị ọhụrụ, yana mmetụta sitere na andtali na omenala ndị America na nke mba ụwa.
3050 K Street NW, Suite 101, Washington DC 20007, Ekwentị: 202-525-1402
2. Ogwe Hogfish na Grịl, Key West, FL
Ogwe Hogfish na Grịl bụ ụlọ oriri na ọ ownedụ ownedụ nwere mpaghara dị na Florida Keys nke na-enye nri n'akụkụ osimiri n'akụkụ ụwa ochie na ụtọ nke Key West.
Nhọrọ nke ụgbọ mmiri na-okpokoro na obere efere Ọpụrụiche nri mmiri dị ka calamari e ghere eghe a na-enyekwa ceviche na ebe a na-adọba azụ.
Ihe pụrụ iche nke onye isi nri na -agụnye fritters conch na cheeu ndị otu, nri Florida abụọ a ma ama.
Ọzọkwa, a na -enye efere aha ahụ na achịcha Cuba ọhụrụ na chiiz swiss, eyịm, na olu, ma nwee ụtọ yiri scallops. Oke tacos ụdị Baja yana osikapa na agwa ga-eme ka ndị taco nwee obi ụtọ.
6810 Front Street, Stock Island, FL 33040, Ekwentị: 305-293-4041
167 Raw na Charleston bụ ntụpọ nke mmanya oyster mbụ nke Nantucket na ahịa nri mmiri. A na-esi na mmiri jụrụ oyi na-adọpụta oysters ọhịa ma na-efe efe n'ụdị ndịda ebe a.
A na -esi na uzuoku wepụta oporo ahụ na anwụrụ ọkụ ya, anwụrụ ọkụ sitere n'ọkụ na -eme ka ụtọ na ụtọ dị ụtọ. Ọpụrụiche mpaghara gụnyere lobster na -apụta, burgers tuna, na tacos azụ dịkwa na 167 Raw.
Drafts mpaghara, nakwa nhọrọ mmanya na champeenu, dị na mmanya ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ.
Ọzọkwa, ndị ọbịa nwere ike ịnọdụ ala na mmanya na-acha ọcha oche 12 ma ọ bụ na otu tebụl mmadụ abụọ, ebe mkparịta ụka enyi na enyi na-ejikọ na gburugburu ọkụ.
193 King St, Charleston, SC 29401, Ekwentị: 843-579-4997
4. Ogwe Oyster Matunuck, South Kingston, RI
Matunuck Oyster Bar nwere nnukwu oysters, cherrystones, obere olu na oporo si Rhode Island. A na-ejikọ oysters ọdọ mmiri nke ụlọ nri ahụ na akwụkwọ nri na ahịhịa.
Agbanyeghị, iji mee usoro kachasị mma, a na -akpachapụ anya nke ọma na -akọ nri mmiri kacha mma na akwụkwọ nri. Achịcha calamari kpochapụwo dị na menu, yana salad quinoa crab nwere otu na karọt na vinaigrette lemon.
A na -egosi nri mmiri dị n'ime obodo na ihe ọkụkụ sitere n'ugbo ha na ofe, salads, na sandwiches. Jambalaya nyere ụkwụ nshịkọ eze Alaska osikapa bụ naanị ole na ole n'ime nri azụ.
Steak dị iche iche, spaghetti, na efere ọkụkọ mejupụtara menu.
629 Succotash Road, South Kingstown, RI 02879, Ekwentị: 401-783-4202
5. Angị Crab Shack, Mesa/Phoenix, Arizona
Ebe iri na -ebuga efere cajun kachasị na Ndagwurugwu Anyanwụ, Shack Crab Shack na Mesa, Arizona bụ nri steeti na -ekwu na ama ama ya.
Na mgbakwunye, menu nri ehihie gụnyere gumbo ma ọ bụ clam chowder, yana obere nhọrọ nke salads ọhụrụ.
Ndị ọbịa nwere ike jiri anụ ha na -ahọrọ anụ ma ọ bụ ofe tofu dị ụtọ hazie nnukwu efere wee si na nhọrọ ndị ọzọ maka nri ngwa ngwa juputara na ụtọ.
The nchịkọta nri abalị niile, nke enwere ike ịnweta ụbọchị niile, na -amalite site na nnukwu nhọrọ nke ihe oriri na -eri mmiri. Achịcha sandwiches, ọkwá nri mmiri, na nhọrọ nkata nri abalị na friji ha pụrụ iche dịkwa.
2740 S Alma School Rd, Mesa AZ 85210, Ekwentị: 480-730-2722
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ Erimeri kacha mma na USA. Bob's Clam Hut mepere na 1956, ogologo oge tupu Route One abụrụ mpaghara ịzụ ahịa na -atọ ụtọ ọ bụ taa.
Ọzọkwa, ụlọ oriri na ọ isụ isụ a na -ewepụta maka ịnọgide na -eje ozi azụ a ghere eghe mara nke ọma n'ụzọ ọdịnala nke ndị bi na Maine toro na -atụ anya ya.
Kwa ụbọchị, a na -ewepụta akịrịka Bob dị ọhụrụ iji hụ na mma kacha mma nke ihe oriri na-esi na mmiri ahọrọ. A ka na -akwadebe ihe nchịkọta nri dị ka steeji lobster na mbinye aka Bob eghe eghe eghe.
Bob's Clam Hut na-agba mbọ maka nlekọta gburugburu ebe obibi, na-enweta ike anyanwụ kpamkpam ma na-eji ihe ndị nwere ike imebi ihe na ihe ndị ọzọ plastik.
315 US-1, Kittery, ME 03904, Ekwentị: 207-439-4233
7. Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ Erimeri: Red Fish Grill, New Orleans, LA
A na -enye azụ ọhụrụ na azụ azụ n'oge ọhụrụ na Red Fish Grill, nke dị na ngọngọ mbụ nke Street Bourbon. Ndị na -eri nri nwere ike ịnọdụ n'oche buru ibu na mmanya mmanya, nke nwere mgbidi brik na -enweghị ihe ọpụrụiche na ihe osise mmiri.
Ejila ihe eji arụ ọrụ ugbo na azụ nke onye ọkụ azụ obodo mepụta nri pụrụ iche dịka oysters bbq, hickory grilled redfish, na mmiri mmiri gumbo na soseji agụ iyi.
Pudding achịcha achịcha abụọ nke Red Fish Grill bụ njedebe zuru oke maka nri abalị ọ bụla. Achịcha, salads, na sandwiches dị maka nri ehihie, ebe menu mgbede na -egosipụta nnukwu azụ azụ Gulf na ọpụrụiche ahịhịa.
115 Bourbon St, New Orleans, LA 70130, Ekwentị: 504-598-1200
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ Erimeri kacha mma na USA. Maguy na Gilbert LeCoze hiwere Le Bernardin na Paris, ihe ịga nke ọma ụlọ oriri na ọ ledụ immediateụ ozugbo mere ka ọ gbasaa na New York.
Ịdị mfe nke iwepụta azụ ọhụrụ nke ejiri nkwanye ùgwù kwadebere na -emesi ụkpụrụ ahụ ike ihe oriri mmiri kwesịrị ịbụ ebe nlebara anya.
Ọzọkwa, ndị ọbịa nwere ike ịhọrọ site na ụdị nri ụtọ dị iche iche, yana ma ọ bụ na-enweghị mmanya mmanya, nri ehihie 3, yana nri abalị 4 na menu.
Tụkwasị na nke a, agbasara onyinye ụlọ oriri na ọ inụ restaurantụ na 2014 na mgbakwunye nke mpaghara ihe omume ọkaibe maka mmemme pụrụ iche na nnọkọ ụlọ ọrụ.
Ha emeperela mmanya mmanya mara mma nke nwere menu ọkụ na ihe oriri nwere ike ịkekọrịta na ndepụta mmanya na -eto eto.
155 W 51st St, New York, NY 10019, Ekwentị: 212-554-1515
9. Ihe oriri mmiri nke Coni, Inglewood, CA
Ihe oriri mmiri nke Coni na-akwadebe ezigbo nri mmiri Mexico nke Nayarit nwere ihe ọhụrụ na-esi na Mexico ebubata.
Ọzọkwa, Coni's Seafood na-enye mpaghara Inglewood ihe nrite na-emeri ihe karịrị afọ iri atọ, na-amalite n'ubi ya ma na-ebugara nwa ya nwanyị uwe mwụda ahụ.
Nchịkọta nhọrọ na -amalite site na ngwa nri ceviche na ọzọ ochie efere azụ mmiri ochie dị ka campechana na marlin tacos.
Nri shrimp ha na -abịa n'ụdị dị iche iche, gụnyere galik buttery, ọbara ọbara na -acha ọkụ, na jalapeno nwere chiiz na ude mmiri. Lemọnade a pịrị apị ọhụrụ na nhọrọ nke biya Mexico bụ ihe oriri dị.
3544 Highway Highway, Inglewood, CA 90303, Ekwentị: 310-672-2339
10. Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ Erimeri: Ụlọ Azụ Mama, Paia, HI
Floyd na Doris Christenson gara South Pacific afọ anọ n'ịchọ ụlọ agwaetiti kacha, na Azụ Mama bụ nrọ ha mezuru.
N'etiti oke osimiri steepụ nke Maui, ezinụlọ na-eto eto malitere ụlọ oriri na ọ fishụ fishụ azụ ọhụrụ na 1973. Ụlọ Azụ Mama na-enye nri ụdị nri Polynesia nke a na-enweta site na azụ azụ kwa ụbọchị nke ndị ọkụ azụ na mpaghara ahụ kemgbe mmalite.
Tropical Ono, Mahi-Mahi mara mma nke ukwuu, na ndị bi n'oké osimiri dịka Lehi, Uku, na Onaga so na azụ a na-ebubata kwa ụbọchị. Nchịkọta nri kwa ụbọchị ka na -agụnye njigide azụ nke ndị ọkụ azụ na mpaghara ahụ, kwadebere n'ụzọ ịhụnanya dị ka Mama.
799 Poho Ebe, Paia, HI 96779, Ekwentị: 808-579-8488
Azụ mmiri Chihuahua bidoro dịka obere nkwado maka nri ezinụlọ nke na -eje ozi ceviche, nri mmiri, na mmanya mmanya n'akụkụ ebe a na -ewu mkpụrụ osisi na Nogales, Mexico.
Okwu nri nri ya na -atọ ụtọ gbasara ngwa ngwa n'etiti ndị mmadụ ma mechaa ghọọ ụlọ oriri na ọ completeụ restaurantụ.
Mgbe akụkụ nke ezinụlọ kwagara Arizona, o mekwara Mariscos Chihuahua. Ọtụtụ ọgbọ ka e mesịrị, ezinụlọ ahụ ka na -enyekwa usoro nri ọdịnala ama ama ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 50 gara aga, gụnyere ceviche ha, mmiri mmiri na -amịkpọ n'ime mmiri lemon, wee tụba ya tomato, yabasị, kukumba na ihe ụtọ.
Ọzọkwa, menu nri abalị na -enye nhọrọ nke azụ, oporo, na nri ọkụkọ ejiri salad, osikapa, na fries rụọ ọrụ.
1009 N Grande Ave, Tucson, AZ 85745, Ekwentị: 520-623-3563
12. Ahịa nri mmiri ebe nchekwa ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, Mayport, FL
Ahịa Safe Harbor Azụmaahịa & Ụlọ oriri na ọtaụ asụ ka a na -ahụta dị ka ihe oriri kachasị mma na mpaghara Jacksonville tọrọ atọ kwa ụbọchị ma kwadebere ya na ikuku nkịtị. Kemgbe ihe karịrị afọ 25, ahịa a eresịla ndị mpaghara Atlantic ahịa azụ ọhụrụ na azụ azụ.
Ụlọ oriri na ọ emergedụ emergedụ pụtara na 2013 na -eje ozi ọkacha mmasị Florida, esi nri ya na ọmarịcha mmiri ịhụ na ụgbọ mmiri na -abịa site n'ịkụ azụ.
Na mgbakwunye, menu na -enye nri dị ka ahịrị gator na nacho shrimp na nnukwu nkata iri nri ejiri poteto eghere eghe, kabeeji na ụmụ nkịta na -agbachi nkịtị. Achịcha, salads, tacos, na sandwiches dị na -enye ọtụtụ ụtọ na ụdị.
4378 Ocean Street #3, Mayport, FL 32233, Ekwentị: 904-246-4911
13. Ụlọ Ahịa Azụ Pacific Beach, San Diego, CA
Ụlọ ahịa azụ azụ Pacific Beach bu ụzọ mepee ụzọ ya na 2010 na njide kachasị ọhụrụ nke ụbọchị. Ndị ahịa nwere ike họrọ site n'ụdị azụ dị iche iche na nhọrọ nri mmiri dị na menu nke aka gị.
Mgbe ahụ họrọ marinade na nhọrọ ngosi, dị ka tacos ghere eghe ma ọ bụ eghe, salads, sandwiches, ma ọ bụ efere nri abalị.
Ọkacha mmasị ụlọ ahịa azụ na -agụnye Pineapple Express taco na Poké Bowl, nke ejiri Ahi ọhụrụ etinyere na soy sauce, jiri ginger na ose na -acha uhie uhie gwuo, tinye ya na Sriracha aioli na ube oyibo ube wee jeere osikapa jasmine na kukumba na ihe nrịbama. .
1775 Garnet Ave, 92109 San Diego, Ekwentị: 858-483-1008
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ Erimeri kacha mma na USA. Providence na -ewepụta nri mmiri kacha mma dị na mpaghara, nke onye osi nri amaara nke ọma na nkwanye ugwu kwadebere.
Agbanyeghị, iji jigide ịdị mma kachasị mma maka ọgbọ ndị na-abịa n'ihu, Chef Cimerusti na-ekwusi ike na iji naanị anụ ọhịa jidere, ihe oriri na azụ na -adigide na azụ sitere na mmiri America.
Nchịkọta nri ehihie nwere ihe ochie dị ka oysters na ọkara shea na fritters clam, yana entrees gụnyere Vermilion Rockfish na menu ịnata nri ụzọ anọ.
Ọzọkwa, nri nri abalị na-amalite site na nri pụrụ iche dị ka caviar a zụlitere n'ubi na truffles ọcha ndị Italiantali na pasta, risotto, ma ọ bụ omelet. Providence na -enye menu atọ atọ na -atọ ụtọ ma ọ bụ na -enweghị mmanya mmanya na mgbede.
5955 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90038, Ekwentị: 323-460-4170
Ndị isi nri Donald Link, Stephen Stryjewski, na Ryan Prewitt kere Pêche Seafood Grill site na mmetụta sitere na South America, Spain na Gulf Coast.
Nchịkọta ahụ na-enye nri nri mmiri mara mma na usoro nri ụwa ochie esiri na oghere mepere emepe site na iji azụ ọhụrụ mpaghara na akụrụngwa ugbo na-adigide.
Akara mmanya nwere salad nri azụ na nshịkọ nshịkọ, obere efere na ebe nri ga-amalite, ofe na salad ọhụrụ, na nri abalị nwere azụ azụ Louisianna na oporo Gulf so na nhọrọ iri nri.
Njikọ Stryjewski Foundation, nke bu n'obi 'inye aka zụọ, zụọ na inye ndị na-eto eto nke New Orleans aka,' bụ ụlọ oriri na-emeri emeri na-enyeghachi obodo.
800 Magazine St, New Orleans, LA 70130, Ekwentị: 504-522-1744
Ụlọ oriri na ọoodụ Seụ kacha nri mmiri kacha mma 10 na Myrtle Beach
Gaa n'ihu na -agụ ka ịmụta maka ụlọ oriri na ọoodụafụ ndị ọzọ na mmiri mmiri na Myrtle Beach.
1. Ụlọ oriri na ọ Seụafụ ihe oriri nke Captain George
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ mmiri kacha mma na osimiri Myrtle. Ụlọ oriri na ọ Seụafụ ihe oriri nke Captain George bụ otu n'ime nri iri nri iri na abụọ kacha mma nke America, na-ekwe nkwa inwe afọ ojuju na afọ ojuju afọ n'otu oge.
Captain George bụ ihe na-atọ ụtọ maka uche niile, yana ọmarịcha ikuku ya, ọrụ nkwanye ugwu yana nri na-atọ ụtọ nke ukwuu, nke dị naanị otu okwute site na Broadway na Beach.
Buffets na First Catch dị ọnụ ahịa nke ukwuu, ezinụlọ ga -enwekwa obi ụtọ ịmụta nke ahụ ụmụaka na -erubeghị afọ anọ na -eri nri n'efu mgbe a na -azụrụ nkuru nri okenye.
Enwere ike ịnabata nnukwu ndị otu n'ụlọ oriri na ọ ifụ ifụ ma ọ bụrụ na e mere nkwadebe na mbụ.
Dị na: 1401 29th Avenue, North Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-916-2278
2. Rockefellers Ogwe Raw
Na Rockefellers Raw Bar, ị ga -ahụ ihe ọ bụla ị na -achọ. Rockefeller Raw Bar, nke dị na North Myrtle Beach, na -agba mbọ izu oke, dịka ọ na -egosi site na ọmarịcha ọrụ ndị ọrụ na efere ọmarịcha ọ bụla na -esi na kichin pụta.
Ọzọkwa, Ụlọ oriri na ọ servesụ servesụ na -enye tuna, lobster, mọsel, oysters, scallops, na crawfish, yana ketles na -adịghị ahụkebe, nke na -ere ihe ọkụkụ na -ekpo ọkụ sie n'ime ofe ị họọrọ ma na -atọ ụtọ nke ukwuu.
Ọnọdụ Rockefellers Raw Bar na -atọkwa ụtọ, ebe a na -agba ndị na -eri nri ume ka ha nọdụ ala ma zuru ike n'otu n'ime oche onyeisi ụlọ oriri na ọ restaurantụ whileụ dị mma mgbe onye na -ere mmanya na -akwadebe ihe ọ andụ andụ na kichin ga -arụ ọrụ.
Dị na: 3613 Highway 17 South, North Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-361-9677
Ogwe Oyster nke Dirty Don na Grịl bụ ụlọ oriri na ọ styleụ Keyụ West-West nwere ebe abụọ na Myrtle Beach, otu dị n'akụkụ ụzọ na nke ọzọ n'ime obi Myrtle Beach. Ọ na -enye ihe niile site na nku dị ọkụ ruo oysters ọhụrụ na ọkara shea.
Ndị obodo na ndị ọbịa agaala Dirty Don iji lelee nri ha, ọkachasị Dunkin 'Pot a ma ama, nke juputara na mọzụlụ, ọka na cob, soseji na -egbu egbu, na achịcha galik.
Nri dị oke mma n'agbanyeghị ebe ọ bụla ị gara, ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ enwetala Asambodo Ọkacha mma site na TripAdvisor. N'ime izu ahụ, echefula oge obi ụtọ ha na oke oporo!
Dị na: 408 21st Avenue North na 910 North Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-448-4881
4. Preston si Erimeri ihe oriri
Nri oriri nri Preston bụ nrọ onye na -anụ nri mmiri mezuru. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ bụ nhọrọ nri dị egwu maka ma ndị obodo ma ndị njem, yana nri dị ụtọ, ụfọdụ ọrụ kacha mma na mpaghara ahụ, yana ihu ụtọ.
Nnukwu nri nri nwere azụ na -atọ ụtọ na anụ ehi na -atọ ụtọ, yana akụkụ dị ụtọ dị ka akwụkwọ nri mara mma na achịcha a mịrị amị ọhụrụ.
Ogwe salad Preston buru ibu, nke nwere ụkwụ 15 nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mkpụrụ osisi mara mma, ọtụtụ akwa, na nri dị ụtọ dị ka oporo na salad shellfish, salad pasta, na oporo esi nri esiri esi nri, bụ otu n'ime isi nri ụlọ oriri na ọ drawsụ .ụ.
Ụmụaka nọ n'okpuru afọ atọ na -eri nri n'efu n'ụlọ mmanya nwa ewu.
Dị na: 4530 Highway 17 South, North Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-272-3338
5. Erimeri Ihe Nri Ụwa
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ mmiri kacha mma na osimiri Myrtle. Na nri nri mmiri mmiri, onye njem ọ bụla ga -ahụ nri abalị ezumike kacha mma. A maara World Seafood maka nri mmiri ọhụrụ ya, steak ya kachasị elu, yana ngwaahịa kacha mma na mpaghara.
A na -ewere ihe ọ bụla na -apụ na kichin dị ka ọrụ nka, a na -ewere ahụmịhe iri nri ọ bụla dị ka mmemme.
Nwee anụ mmiri ara ehi a mịrị amị nke zuru oke ma ọ bụ ihe oriri na -atọ ụtọ nke a kwadebere n'ụzọ dị iche iche. Obi abụọ adịghị ya na na ihe karịrị 100 ihe na -eme nri, a ga -emeju nri ọ bụla.
Ọ bụrụ na onye na -eri nri anaghị enwe mmasị iri nri site na nri nri nri, menu laaf carte menu dị ịtụnanya.
Malite n'ụkwụ crab-paụnd-paụnd, kabobs nri mmiri, ma ọ bụ klaasị dị ka efere lobster niile, Platform Seafood World, ma ọ bụ scampi ahịhịa.
Dị na: 411 North Kings Highway, Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-626-7896
6. Ụlọ Chesapeake
Ụlọ Chesapeake anọwo na-enye nri mmiri kacha mma na mpaghara USDA steak ruo ihe karịrị afọ 40, ọ bụkwa nke ezinụlọ nwere kemgbe 1971.
Ọnọdụ ebe a na -ere nri zuru ezu iji mee ka ndị ahịa lọta n'onwe ha, nwee ọmarịcha echiche mmiri n'akụkụ osimiri nke ga -amasị onye ọ bụla.
Maka nri anyasị na -atọ ụtọ, nwalee ofe azụ azụ ama ama nke Uncle Bill, echefukwala ịtụ salad n'akụkụ ka ịlele uwe salad nke ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ.
Echefukwala ka ị jiri nri ole na ole cinnamon mpịakọta Chesapeake House gụchaa nri gị, nke a na -eme ọhụrụ kwa ụbọchị na ebe a na -eme achịcha.
Dị na: Ekwentị: 843-449-3231, 9918 Highway 17 North, Myrtle Beach, South Carolina
7. Ogwe Oyster Bimini na Cafe nri mmiri
Mgbe ọ na-abịa Ogwe Oyster nke Bimini na kafe, enweghị ụbọchị ọjọọ. Bimini's, nke mepere ụzọ mbụ ya na 1985, na -eweta ụtọ na mmetụta nke agwaetiti ahụ na Myrtle Beach ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ site na nhọrọ nke azụ na azụ kacha ọhụrụ na steeti ahụ.
Ndị ọbịa nwere ike ịtụ anya ọrụ pụrụ iche site n'aka ndị ọrụ nwere ọmarịcha, yana ọmarịcha ụlọ oriri na ọ restaurantụ, ụ, nnukwu ihe ọ drinkụ drinkụ mmanya, na egwu na-akpali egwu.
Họrọ ọpụrụiche dị ka ite uzuoku, nke gụnyere ọkara oysters, clams, na mọsel, yana otu ụzọ n'ụzọ anọ nke paụnd ahịhịa na -atọ ụtọ, otu paụnd ụkwụ, na ọka na cob maka ahụmịhe Bimini dum.
Were ụgbọ ala banye n'agwaetiti Bimini wee rie ụfọdụ n'ime nri azụ kacha ukwuu n'agwaetiti ahụ na Bimini.
Dị na: 930 Lake Arrowhead Rd, Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-449-5549
8. Ogwe nri 14 na ebe ezumike
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ mmiri kacha mma na osimiri Myrtle. Nri 14 Ụlọ oriri na ọ Loụ Loụ na ebe ezumike ndidi na -enye ụfọdụ nri kacha mma n'otu n'ime ọmarịcha mmiri iyi Myrtle Beach kemgbe 1985, nwere ọmarịcha vista nke oké osimiri, sọlfọ na-akụda, na ọdịda ọdịda anyanwụ.
Pier 14 bụ nke Bryan Devereux nwere ma na-anya isi na ọ bụ ahụmịhe iri nri nke na-ekewapụ ya na ụlọ nri ndị ọzọ dị na mpaghara.
Ndị ọbịa n'ụlọ oriri na ọ forụ forụ maka nri ehihie nwere ike ịlele nnukwu Sanwichi azụ ma ọ bụ Sanwichi achịcha achicha, ebe ndị ọbịa mgbede kwesịrị ịhọrọ crustacean ọkụkọ, efere efere, ma ọ bụ efere efere.
Ndị ọbịa nwekwara ike ịnwale aka ha n'ịkụ azụ n'akụkụ oge, ebe ụlọ oriri na ọ restaurantụ hasụ nwere azụ na azụ ahịa.
Dị na: 1306 North Ocean Boulevard, Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-448-6500
9. 21 Isi na North Beach
21 Isi na North Beach bụ ngwaahịa nke ihe karịrị afọ 25 nke ahụmịhe na ịnụ ọkụ n'obi maka nri pụrụ iche na ebe mara mma nke Lovin 'Oven Caterers, onye ama ama na Long Island na Manhattan nwere.
Ọzọkwa, isi nri nke 21 nwere anụ ụbọchị nká dị ụbọchị 28 yana nri kacha mma na freshest dị na Myrtle Beach. A maara ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ maka iji sushi kacha ukwuu na Grand Strand.
Nleta na 21 Main na North Beach na -enye ahụmịhe iri nri pụrụ iche, nke nwere ọtụtụ nsọpụrụ n'okpuru eriri ha yana nkwanye ùgwù siri ike maka ngwa nri na nri ha na -eme.
Gbalịa efere lobster mmiri oyi na achịcha salmon dị ka ndị na-eri nri, yana nri pụrụ iche nke ndịda na ezigbo sushi na nchịkọta nhọrọ nri.
Dị na: 719 North Beach Boulevard, North Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-315-3000
10. Oriakụ Azụ Efere Grịl
Nke a bụ otu n'ime ụlọ oriri na ọafụafụ mmiri kacha mma na osimiri Myrtle. Ebumnuche Oriakụ Fish bụ ime ka onye ọbịa ọ bụla nwee mmetụta dịka onye obodo mgbe ha na -apụ n'ụlọ nri, ọ na -emezu nke a site na idobe ihe nkịtị. Ekwela ka mpempe akwụkwọ na enweghị ezigbo arịa ọlaọcha duhie gị.
Ndị isi nri pụrụ iche nke Oriakụ Fish nwere ike ilekwasị anya n'ịhụ na ọ bụ naanị azụ kacha nwee ụtọ na nke kacha ọhụrụ ka a na -enye onye ọbịa ọ bụla na -echegbu onwe ya n'ihi na ha ahọrọla ịghara ilekwasị anya na ntọala ebe mara mma.
Oriakụ Azụ na -azụta mpaghara ka o kwere mee iji dowe ihe ezi uche dị na ya, nke na -agbakwunye nnukwu nri na nnabata ezinụlọ nke ụlọ oriri na ọ.
Otu nleta bụ naanị ihe ọ ga -ewe iji bụrụ nke ejikọtara ọnụ, agụụ anaghị agụ ndị njem.
Dị na: 919 Broadway Avenue, Myrtle Beach, South Carolina, Ekwentị: 843-946-6869
Tags:obodo nri kacha mma na america, obodo nri kacha mma n'ụwa, nri mmiri kacha mma n'ụwa, ụlọ oriri na ọafụafụ mmiri kacha mma na los angeles, ụlọ oriri na ọafụ seụ mmiri kacha mma na florida, ụlọ oriri na ọafụafụ kacha mma na nyc, ụlọ oriri na ọafụafụ mmiri kacha mma n'ụwa, ụlọ oriri na ọoodụ seụ mmiri kacha mma dị m nso
Ntụle usoro iheomume nke Google Maps & Nzọụkwụ iji Kwado ma ọ bụ gbanyụọ ọnọdụ gị
Nri Mediterranean n'akụkụ m na ụlọ nri kacha mma Mediterranean na US
Nri Japanese dị m nso 14 Ekwesịrị ịnwale efere ndị Japan
Akpụkpọ ụkwụ Nike kacha mma maka ijegharị, ịgba ọsọ ma ọ bụ maka ndị nọọsụ na -eguzo ụbọchị niile
Osimiri kacha mma n'ụwa na agwaetiti Caribbean dị egwu maka ezumike
Deodorant ụmụ nwoke kacha mma na ndị na -emegide onwe ha dị ịtụnanya ka ị dị ọhụrụ
Exfoliators kacha mma maka ihu na ụdị akpụkpọ anụ niile na ọmarịcha uru ha
Ndị na -eme mkpọtụ kachasị mma na Netflix na ihe nkiri 25 na -enyo enyo ịlele